'Ny zava-misy araka ny ahitanay azy' dia izao i Martin Vrijland: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 September 2019	• 5 Comments
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia nanontany matetika aho hoe maninona no tsy namoaka boky. Efa fantatro sahady fa ho avy ny boky, fa mbola ho toy izany ny sary. Izany angamba no voafaritry ny fiandrasana ny fahavitan'ny fisie rakitra amin'ny telefaona na solosaina. Fotoana ela vao ho voaray izay vaovao rehetra. Manontany aho indraindray hoe aiza no ahazoako ny fahalalana rehetra. Ohatra, ny olona dia nanoro hevitra fa mety tsy maintsy namaky betsaka aho. Na izany aza, novakako kely araka izay azo natao, afa-tsy ireo vaovaom-baovao (sandoka) avy amin'ny haino aman-jery mahazatra, satria ampiasaiko ny hetsika misy ankehitriny mba hanondroana ireo fomba ampiasain'ny besinimaro sy voarindra.
Ny zavatra tena tokony ho fantatsika dia tsy miditra amin'ny atidoha, fa avy amin'ny fahatsapantsika tany am-boalohany. Izany no antony nampitahako azy tamin'ny fisisihana etsy ambony.
"Ny zava-misy araka ny ahitantsika azy" dia mamaritra ny fomba voalamina ny an'izao tontolo izao sy izao rehetra iainantsika izao. Dikan-teny lehibe sy voalamina misy ireo lahatsoratra nosoratako momba ity tranokala ity ity. Ny teny mazava dia mahatonga azy io ho boky azo inoana ho an'ny vanim-potoana rehetra. Ny boky dia tsy manaisotra ny fikatsahana ara-pivavahana na ara-panahy fotsiny fa manome fanazavana momba ny vahaolana amin'ny olana rehetra atrehantsika. Mpitarika ara-panahy na ara-pivavahana maro no mandefa anao amin'ny lalana iray, fa manangana marika fanontaniana bebe kokoa ihany koa, ka tsy mbola azo antoka sy azo antoka ianao. Zavatra iray mikitroka. Resy lahatra aho fa hanaisotra karazana fisalasalana ity boky ity ary hiantoka ny fahazoanao farany ny toerana misy anao sy ny fomba mora hivoahana.
Satria nanorina fototra iray aho matetika amin'ny fanoratana ity tranokala ity, tsy afaka amidy aminao aho. Ho asa ara-barotra io. Koa atolotra anao ho boky toy ny fanomezana aho rehefa maka ny fanao isan-taona ho an'ity tranokala ity. Izao dia misy ny mpamatsy vola sasany hisaina hoe: "Oh, mila boky maimaimpoana aho". Saingy, satria tsy afaka mandoa ny vidin'ny fanaovana pirinty sy fandefasana entana aho, dia tsy maintsy atao izany raha maka mpikambana vaovao ianao. Tena fanomezana tokoa ny mpikambana iray amin'izany. Amin'ny fanomezana anananao dia afaka mandoa ny vidin'ny fanaovana pirinty sy fandefasana ny boky aho. Eto ambany ianao dia afaka mahita ny endriky ny boky.
Ahoana ny fomba fiasa ao Ianao manindry ny 'lasa mpikambana, dia misafidiana iray mpikambana isan-taona na avo kokoa. Efa iray ianao mpikambana isan-taona ho an'ny € 25. Alefaso avy hatrany amiko ny fangatahana isan-taona avy eo, mba hahafahako mandefa mailaka aminao izay anaovako ny adiresy fandefasana anao. Tsy voatahiry amiko io fampahalalana io ary tsy hisy hitranga aminy, ankoatry ny hoe efa nampiasaina handefasana ilay boky ho anao izy. Miaraka amin'ny maha-mpikambana isan-taona anao dia tonga mpamatsy vola mandritra ny herintaona ianao ary manohana ny asako mba hanohizako.
Ny andiany voalohany andrasana sy fanaterana boky dia ny volana novambra amin'ity taona ity. Na izany aza, zava-dehibe ny lasa lasa mpikambana anao, satria ny zava-drehetra dia mifandraika amin'ny mahafeno ny vidin'ny fanaovana pirinty sy ny fandefasana. Miaraka amin'ny fanomezana anjaranao dia manohana hatrany ny asako amin'ity tranokala ity sy ny saram-pampianarako ianao.
Azonao atao ny mitondra fiovana ary zava-dehibe ny safidinao!
Maninona ny olombelona no alaim-panahy hahatratra ny tsy fahafatesana sy ny firaisana amin'ny AI
Fampahalalana lehibe ho an'ny fiainanao ankehitriny
Tags: boky, de, ny, Featured, Martin, firenena malalaka, mitandrina, we, raha ny marina, toy ny
25 Septambra 2019 ao amin'ny 07: 38
Izaho dia nanana 'mpividy isan'ora isan-taona' mba hahazoana ny boky, saingy azoko an-tsaina fa maro loatra izany ho an'ny maro. Izany no antony anolorako ankehitriny ilay boky miaraka amin'ny fanao isan-taona mahazatra. Avy eo, na dia tsy misy na inona na inona dia mijanona, fa kosa momba ny mpitondra hafatra.
29 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 58
Mety ho hevitra iray ihany ve ny hivarotra ilay boky amin'ny fomba nomerao ho toy ny e-boky? Mihevitra aho fa azo atao izany amin'ny bol.com.
Hanome baiko ny bokinao aho, mahaliana ahy ny fomba ifandraisan'ny votoaty an'ireo lahatsoratra anananao.
Mety hifanaraka amin'ny lahatsoratrao izany, saingy voafaritra kokoa sy kokoa amin'ny antsipiriany?
5 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 40
Mihidy ny mpikambana.
Eny, mbola manana fanontaniana hafahafa aho. Nohazavainao matetika fa ankoatry ny fitandremana ny raharaha ankehitriny sy ny fikarohana ary ny fanoratana lahatsoratra ary ny fahaveloman'ny ankapobeny dia saika tsy afaka manoratra boky iray miaraka. Ahoana ny fomba nahitanao izany?
6 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 49
Araka ny efa tsikaritrareo, manoratra lahatsoratra vitsy kokoa aho ka nahafahako nandefa fotoana ho an'izany.
Peter Westerhout nanoratra hoe:
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 14: 28
« Ny lahateny nataon'ny Greta Thunberg UN dia mampahatsiahy ny lahatenin'ny "zazakely nariana tamin'ny incubator" tamin'ny ady tany Irak
Papa Francis no miantso ny mpitondra eran'izao tontolo izao ho ao Vatican amin'ny 14 amin'ny volana Mey 2020 hanao pact manerantany »
Total visits: 12.991.276